फागुन २३ देखि ५५ वर्षमाथिका नागरिकलाई कोरोना खोप दिने तयारी – Samabeshi Khabar
३० माघ २०७७, शुक्रबार १५:०३ by Samabeshi Khabar
काठमाडौं, (ससं) । सरकारले २३ फागुनदेखि आम सार्वसाधारणलाई कोरोना खोप दिने तयारी गरिरहेको छ ।
अब थप खोप आउन निश्चित जस्तै भएको भन्दै समुदायमा जाने योजना बनाइएको छ । फागुन २३ गतेदेखि ५५ बर्षमाथि उमेर समूहलाई खोप दिने योजनाअनुसार काम भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए । ‘खोप आउने सुनिश्चितता भएकाले यस्तो तयारी गरेको हौं’ उनले भने, ‘हामी अन्तिम चरणको तयारीमा छौं ।’
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. भीम सिंह तिंकरीका अनुसार खोप खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगको बताउँछन् । ‘योजना अनुसार काम भयो भने हामीसँग भएको खोप नसकिँदै थप आउँछ’ उनले भने, ‘खोप आयातका लागि एकाध प्रशासनिक विषय मिलाउदैछौं ।’
मन्त्रालयका स्रोत अनुसार भारतको सेरम इन्स्टिच्युटको कोभिसिल्ड खोप केही खरिद गरेर र केही अनुदानमा आउन लागेको छ । पहिलो चरणमा २० लाख डोज खोप ल्याउन कम्पनीका प्रतिनिधिसँग कुराकानी भइरहेको छ । ‘योजनाअनुसार काम भयो भने एक साताभित्रै खोप आउनसक्छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
यसका साथै कोभ्याक्समार्फत पनि फेब्रुअरी अन्तिमसम्म कोरोना खोप आइपुग्ने अपेक्षा रहेको छ ।